ITheku lizosingatha umcimbi wonobuhle okokuqala e-Afrika | News24
Johannesburg – Izidlovukazi ezinhle ezivela emazweni ehlukene emhlabeni wonke zizotheleka KwaZulu-Natal kulo nyaka njengoba ozime bomcimbi we-Mrs Universe bezonyathela ezwenikazi i-Afrika okukuqala ngqa.
Lesi sifundazwe esigudle ugu sihlabene ngesivumelweno sokusingatha lo mcimbi waminyaka yonke nokuzobe sekungowesi-40 kulo nyaka nalapho kuzotheleka khona amazwe angu-84 azobe ezoqhudelana ePeople’s Park, eMoses Mabhida Stadium, ngomhlaka-2 Septhemba 2017.
OLUNYE UDABA: IZITHOMBE: UKhanyi Mbau uwashintshe kahlanu ama-bikini ebhishi
Ngokuhambisana nengqikithi yakulo nyaka ethi Empowering Women. Creating Change, lo mcimbi wozime uqhakambisa abesifazane abashadile abaphakathi kweminyaka engu-25 kuya kwengu-45 ubudala abenza umsebenzi omangalisayo ukufukula imiphakathi yabo.
Ngale ngokukhangisa ngokuthi yini iTheku elidlise ngayo, lo mcimbi uzophinde ukhangise nangethalente lakuleli, abadansi kanye nabaculi kubuka abantu emhlabeni wonke.
Ngale komcimbi ozobe ubhekwe ngabomvu wokukhetha ozobaqwaqwada bonke emakhanda, labo abazobe bengenele bazothola isikhathi esanele sokuzithokozisa ezindaweni ezehlukene zesifundazwe baphinde babambe iqhaza nakwezinye izinhlelo.